Ukudityaniswa kwe-ORCID kwi-OSF, iSayensiOpen kunye neZenodo ngokusebenzisa iAfroArXiv - AfricArXiv
E papashwe ngu NguJorem on 27hi ngoFebruwari 2020 27hi ngoFebruwari 2020
I-ORCID kwaye iAfrArXiv iyasebenzisana ukunceda izazinzulu zase-Afrika ekuqhubekiseleni phambili imisebenzi yazo ngokuchonga. I-ORCID ixhasa iAfriArXiv kwaye ikhuthaza izazinzulu zase-Afrika- kunye nezesayensi ezingezizo ezase-Afrika ezisebenza ngezihloko zase-Afrika-ukuba zabelane ngophando lwazo kwisafo esinokuvulwa okuvulekileyo, kwijenali okanye kwezinye iiplatifomu zedijithali ezifikelelekayo.
Njengenxalenye yesiseko esibanzi sedijithali esifunekayo ukuze abaphandi babelane ngolwazi kumgangatho wehlabathi, i-ORCID inika unxibelelwano oluthembekileyo noluthembekileyo phakathi kwabaphandi, amagalelo abo, kunye nemibutho ngokunikezela isazisi (i-https URI enenombolo eziyi-16 ehambelana nomgangatho we-ISO ISO 27729) abantu mabasebenzise ngegama labo njengoko besenza uphando, ubufundi, kunye nezinto ezintsha kwilizwe jikelele.
Funda kabanzi malunga ubume be-ORCID iD.
I-KiaArXiv ibonelela ngeqonga lokuhlawula simahla koososayensi base-Afrika ukulayisha imibhalo yabo ebhaliweyo yokuqala, imibhalo ebhaliweyo eyamkelweyo (amaphepha ashicilelweyo), kunye namaphepha apapashiweyo. Ngokwenza njalo, siyasebenzisana ne IZiko leNzululwazi eliVulelekileyo, UZenodo, yaye ScienceOpen, umntu ngamnye kuthi abonelele ngendawo apho izazinzulu zase-Afrika zinokufaka kwaye zisasaze iziphumo zazo njengamalungu oluntu lwe -AfriAriviv. Zonke ezi zinto zintathu zibekiweyo zine-ORCID zidityaniswe kwinkqubo yazo kwaye zivumele izazinzulu ukuba zibhalise ngokuthunga, zingene kwaye zihlaziye idatha yazo yemisebenzi kwirekhodi yazo ye-ORCID.
Ngolu bambiswano, sinenjongo yokukhuthaza uninzi lwezazinzulu zase-Afrika ukuba zibhalise ezizazisi zabo ze-ORCID ukuze zichongwe, zinxibelelane nemisebenzi yazo kunye negalelo zibonise impumelelo yazo kumaziko ophando, abaxhasi ngemali kunye nabapapashi ngokufanayo.
Bhalisa iDACID yakho
Ngaba sele unayo i-ORCID iD? Sixelele ngamava akho.
Qhagamshelana nathi kwimeko yemibuzo okanye izimvo: info@africarxiv.org.
Ngolwazi oluthe kratya kunye nesikhokelo malunga ne-ORCID yiya ku inkxaso.orcid.org.
I-ORCID ngumbutho ongenzi nzuzo unceda ukudala umhlaba apho bonke abantu abathatha inxaxheba kuphando, ubufundi kunye nolutsha zichongwe zodwa kwaye zixhunyiwe kwiminikelo yazo kunye nemanyano, kwimikhawulo, kwimida, kunye nexesha. | orcid.org
I-AfricArxiv inikezelwe ekukhawuleziseni nasekuvuleni nasekusebenzeni nasekusebenzisaneni nasekusebenzeni kweenzululwazi zase-Afrika kunye nasekuncedeni ukuyila ikamva lonxibelelwano lwezezifundo kwihlabathi liphela. Ukubhalwa kwesandla kunye nefomathi ebanjelwe kwiqonga leAfrikaArxiv ivumela ukusasazwa simahla kunye nokukhawulezisa kunye nengxoxo yehlabathi yokuphuma kophando.
iindidi:	UkuFikelelaVula iSayensiPublishing